Hababka ay u gudbiyaan iCloud Faylal ay si Android
Mase laga phone cusub Android ka iPhone duq ah? Waa hagaag, waxay u ekaan yar adag tahay si aad u beddelaan haddii aad leedahay ugu rarataan culaysyo xogta ku saabsan iPhone. Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, habka badan oo dhan fudud.
Labada nidaam fiican uma tusaaJe wada oo aad u baahan tahay software saddexaad xisbiga sida MobileTrans si ay u caawiyaan xogta kala iibsiga u dhaxeeya macruufka ah iyo qalab Android. Dukaamada Apple oo dhan xogta ku iCloud iyo gurmad iCloud leeyahay oo dhan aad xiriirada, fariimaha, sawiro, videos, Cajalado, abuse call iyo qaar badan oo ka qalab macruufka ah. Laakiin Android uusan si toos ah ula account iCloud ah u hagaagsan. Wondershare MobileTrans Caawimo aad waafajinta cusub Android inay dib ilaa iCloud.
Ka hor inta aanad bilaabin .Wadashaqayntaas ah, aad u baahan tahay soo socda.
2. Android ee USB cable
Bedelka iCloud in Android 1 click
1. Waa dhamaystiran boqolkiiba boqol nabad ah oo khatar la'aan.
2. Waxaad ku wareejin kartaa warbaahinta oo ay ku jirto xiriirada iyo fariimaha qoraalka ah. Waxaad sidoo kale ku wareejin karaa videos, music iyo Guda yeedha.
3. Transfer noqon karaa inta u dhaxaysa macruufka, Nokia Symbian iyo qalabka Android. Waxa ay taageertaa in ka badan 3000 telefoonada iyo shabakadaha kala duwan.
4. interface Simple, oo wuxuu ku Hanuuniyaa habka iyo waxa ay qaadataa laba-saddex daqiiqo oo kaliya.
Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa Wondershare MobileTrans ah si ay u gudbiyaan xogta.
Waxaad kala soo bixi kartaa software ka Wondershare.com. Software waa la jaan qaada Windows XP iyo OS kor ku xusan. Fur faylka .exe oo ku xidh. Hadda xirmaan telefoonka aad Android la your computer via USB. Hadda riix on Soo Celinta From hayaan.
1. Saxiixa in in aad xisaabta iCloud
On suuqa kala socda, dooro iCloud icon. Tani si uu suuqa kala socda meesha aad saxiixdo in shubo xisaabta iCloud aad qaadan doonto. Eegala magacaaga iyo isgarad, oo ha software lagu ogaan aad iCloud gurmad file.
2. dajinta iCloud File kaabta
Marka iCloud waxaa qortey waa in tusi doonaa liiska faylasha dhinaca bidix. Hadda click double on iCloud faylka gurmad oo leh macluumaad telefoonka aad iyo aad rabto in aad ku xidhi. Gujisid A ayaa u muuqda in aad weydiisan doonaa in ay oggolaadaan in download ah. Guji Download ku. Iyadoo ku xiran baaxadda ee faylka, download qaadan doontaa dhowr daqiiqo.
3. howlan iCloud in Android
Ka dib markii iCloud gurmad file waxaa lagala soo bixi, software ka kala sooci karaa faylasha sida xiriirada, qoraal, sawirro, iyo warbaahinta kale. Hadda files diyaar u yihiin in lagu wareejiyo on inay aad telefoon cusub. Waxaad ka eegi kartaa noocyada file taageeray ka mid ah liiska. Hadda riix Start Copy. Haddaba dhawr ilbiriqsi aad faylasha lagu soo guuriyeen doonaa in qalabka Android.
Tani waa hab fudud oo aad waafajinta nooc kasta oo xogta si aad qalab Android yar qasabno fudud. Ma jiraan wax adag ama talaabooyin adag. Wondershare MobileTrans Qabtaan shaqo oo dhan idiin. Software ayaa sidoo kale amaan iyo uma baahnid inaad wax laga walwalo walaac kasta oo gaarka ah.
Kale oo ka isticmaalaya software xisbiga saddexaad, waxa kale oo aad isticmaali kartaa habab kale oo ay u hagaagsan aad email, la xiriir, jadwalka.
Sida loo hagaagsan email iCloud in Android?
Waxaad isticmaali kartaa app Email ku android ay ku darto xisaabtaada email iCloud. Waa hab fudud oo si sahlan ay u helaan email on Android. Halkan waxaa ku qoran tallaabooyinka ay kuu raaci kari waayay:
1. Fur app email iyo tagaan goob ka menu. Haddaba tag in xisaabta ku dar iyo ka jaftaa ku yaal. Tani waxay aad u qaadan doonaa Mudanayaasha ee xisaabtaada. Ku qor email id iCloud iyo password. Hadda ka jaftaa on Mudanayaasha Manual.
2. Next, dooro nooca xisaabta sida IMAP iyo geli faahfaahinta soo socda in ay u goobaha server socda iyo goobaha xilka server:
Goobaha soo socda ee server
- Qabashada Email address email iCloud
- Username- email username iCloud
- Isgaradka iCloud password
- IMAP server-- imap.mail.me.com
Goobaha xilka Server
- SMTP server-- smtp.mail.me.com
- Security Type- TSL (aqbalaan shahaadooyinka oo dhan)
Hadda aad xisaabta ayaa lagu wadaa xaqa ka jaftaa ku soo socda iyo fursadaha galaan xisaabta. Emails aad si toos ah loo baadho ka maqnaan doona waxaad u baahan tahay inaad samayso wax kasta.
Syncing iCloud xiriir la phone Android
Waxaad u hagaagsan kartaa xiriirada iCloud si fudud in aad Android isticmaalaya talaabooyinka soo socda
1. Tag icloud.com iyo gasho in aad xisaabta. Hadda dooro xiriirada oo dhan iyo goob kaliya dooro ikhtiyaarka ah ee dhoofinta vCard. Hadda badbaadin files ee ku saabsan meesha uu ku haboon ee aad PC.
2. Hadda furo xisaab Gmail oo taga si xiriir.
3. Under xiriirada dejinteeda waxaad yeelan doontaa fursad u geliyaan vCard laga dhoofiyey. Just u geliyaan oo guji dejinta.
Hadda aad xiriirka la leedahay waxaa lagu dari doonaa xisaabtaada google. Isticmaal xisaabta google isla in aad Android. Android ayaa si toos ah u hagaagsan doono xiriirada aad.
Sida loo hagaagsan iCloud Calendar aad Android Phone?
In kastoo ay jiraan codsiyo dhinac saddexaad oo aad u isticmaali karto, laakiin haddii aad rabto in aad waxa gacanta ku sameeyo markaas soo socda waa tallaabooyinka.
1. Long in aad iCloud iyo Calendar furan. Fur category kasta oo aad rabto in aad u hagaagsan oo guji share icon.
2. gujisid New muuqan doona iyo hubi Calendar Dadweynaha. Tani waxay ku tusi doonaa URL ah laga bilaabo Webcal.
3. Nuqul url in oo la soo dhaafay galay biraawsarkaaga se ha saarin galaan. Eedayn "webcal" kuna bedesho "http". Hadda riix galaan.
4. Faylka si toos ah lagala soo bixi doona si aad u computer. Hadda fur taariikheed ee Google, oo taga si kale Kalandarada oo guji beddeli xagal icon. Under in jadwalka dejinta xusho.
5. Kaliya dooro file ah oo geliyaan. Dooro category ee kalandarka oo guji dejinta.
Hadda, isticmaali xisaabta google isla in aad Android oo u hagaagsan doonaa kalendarka si aad telefoon.
Waa wax iska fudud si ay u gudbiyaan files iCloud in Android maanta. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa in ay isticmaalaan talaabooyinka soo socda kor ku xusan oo aad ku fiican tahay inuu tago! Dhammaan waxa aad u baahan tahay si ay u gudbiyaan files iCloud in Android waa in ay kaliya qabtaan tallaabooyinka kor ku xusan.
Sida loo Delete Old iCloud ee kaabta faylasha
> Resource > iCloud > Sidee si ay u gudbiyaan iCloud Faylal ay si Android